Mohamed Salah Oo Caqab Weyn Ku Ah Rabitaanka Cristiano Ronaldo – Gool FM
(Real Madrid) 25 Abriil 2018 Mohamed Salah ayaa u muuqda mid dhibaata xoogan ku noqon kara inay rumowdo riyada xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo uu kaga riyoonayo kooxda Real Madrid.
Wargeyska “Daily Mail” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Mohamed Salah uu dhibaato xoogan ku noqday heshiiska cusub uu Cristiano Ronaldo kaga doonayo Real Madrid si loo wanaajiyo mushaarka uu ka qaato garoonka Santiago Bernabéu.
Cristiano Ronaldo ayaa doonaya in sare loo qaado mushaarkiisa kooxda Los Blancos si lala mid dhigo mushaarka ay xidigaha Lionel Messi iyo Neymar Jr ka qaataan kooxahooda Barcelona iyo Paris St Germain.
Salah ayaa ku dhow inuu gaaro finalka Champions League ee xili ciyaareedkan ka dhici doono magaalada Kyiv, ka dib markii ay 5-2 kaga badiyeen Roma kulankii lugta hore wareega afar dhamaadka tartanka UCL.
Iyadoo ay Liverpool kusii dhawaaneyso inay u gudubto kulanka finalka, ayay wararka xaqiijinayaan in Cristiano Ronaldo ay muhiim tahay in uu kooxdiisa ku hogaamiyo inay kasoo gudbaan Bayern Munich, kadibna uu kaga guuleysto Salah tartanka UCL, si uu ugu qanciyo madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez inuu u qalmo heshiiska cusub.
Madaxwayne Farmaajo oo Hambalyo iyo Fariin Gaaban u diray xulkeena Soomaaliya ee markii ugu horreysay u soo baxay Finalka